Durcal, goob goobiye leh GPS ee carruurta iyo dadka waaweyn | Qalabka Wararka
Isgaarsiinta iyo fursadaha naloo soo bandhigo si aan u helno dadka waaweyn iyo carruurta ayaa hadda aad u jaban oo la heli karo. Xulashada ugu dambeysa ee timi miiska falanqaynta waa shirkad cusub oo la yiraahdo ducal waxaanan falanqeyn doonaa si aan u aragno inay runtii bixinayso awoodo cusub oo qaybtan ah.
Waxaan u falanqeyneynaa sifooyinkeeda iyo howlaheeda si aan u awoodno inaan ogaanno halka ay dhallaankaaga mar walba joogaan iyo, dabcan, sidoo kale odayaashaaga.
2 Noocyada iyo waxqabadka
Daawasho fudud oo waxtar leh. Waxay leedahay guddi yar, laakiin waa la arki karaa oo ku filan, waxaan ku haynaa macluumaadka aasaasiga ah sida batteriga, tillaabooyinka la qaaday, taariikhda iyo caymiska mobilada. Isbeddel yar oo dhinacan ah.
Gacanku aad buu u fudud yahay, oo lagu dhex daray jidh silikoon ah, Labada biin ee dallaca iyo oksijiinta dhiigga iyo dareenka garaaca wadnaha ayaa ku sii jira qaybtiisa hoose. Labadani waa dareemayaasha kaliya ee qalabku leeyahay heerka kartida, marka lagu daro inta kale ee sifooyinka farsamada ee aan ka hadli doono hoos.
Heerka naqshadeynta iyo wax soo saarka, saacaddu waxay raadineysaa fududaan, minimalism iyo iska caabin, iyada oo aan wax iska yeelyeel ah. Shaashadda lama taabto, si loo dhex maro xulashooyinka waxaanu riixi doonaa badhanka dhexe, oo leh wadnaha cas sida tilmaame. Dhexdeeda waxaan ku arki karnaa garaaca wadnaha, ogsijiinta dhiigga, fariimaha iyo ugu dambeyntii dami saacadda.
Saacaddu waxa ay leedahay makarafoon, sameecad iyo mobiil daboolan, sidaan sheegnayba waa ay leedahay Kaarka nanoSIM ee adiga kuu gaar ah ayaa lagu daray. Si aan u dhigno waa in aan ka saarno laba boolal oo yaryar oo ay ku jiraan kaashawiito. Dhankeeda, waxay sidoo kale leedahay digniin dhicis oo caqli badan, saacaddu si toos ah ayay u ogaan doontaa waxayna u diri doontaa digniin codsiga Durcal.
Hadda waa waqtigii laga hadli lahaa codsiga. Waa waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan soo dejinno, gebi ahaanba bilaasha ah Android iyo iOS labadaba waxayna noo ogolanaysaa inaan helno saacada, maamulno xuduudaha qaarkood, isla meel dhigno oo, dabcan, aan helno digniinaha aan soo sheegnay.
Geedi socodka wada shaqeyn waa wax fudud:
Codsiga waanu soo dejinay, waxaanan ku samaynaa xisaab talefankeena
Waxaan daarnaa saacadda ka dib markii aan gelinno nanoSIM
Waxaan ku sawirnaa barcode-ka IMEI-ga
Saacadda iyo abka si toos ah ayay isula jaanqaadi doonaan
Runtu waxa ay tahay in nidaamka wada shaqayntu uu yahay mid aad u fudud oo la mahadiyo. Si kastaba ha ahaatee, waa in aynaan iloobin in tan aan u baahan doono inaan soo bandhigno kaadh ay ku jiraan, iyo dabcan qandaraas qorshaha Movistar Prosegur Alarmas:
Lacag bixinta bishii oo leh laba iyo toban bilood oo joogis ah € 19 / bishii
Lacag bixinta sanadkii €190
Waa inaan xisaabta ku darnaa in haddii aan joojino adeegga sanadka ka hor, waa inaan bixin doonaa lacagaha soo haray bishiiba ilaa laba iyo toban bilood. Haa runtii, Qorshayaashan oo dhan waxaa ku jira saacadda oo gebi ahaanba bilaash ah.
Marka la soo koobo, nidaamkan lacag-bixinta is-diiwaangelinta ayaa noo oggolaan doona inaan "xakameyno" carruurteena, dadka waaweyn iyo kuwa ku tiirsan. Adigoo riixaya 3 ilbiriqsi badhanka kaliya ee uu haysto, Waxaan awoodnay inaan ku xaqiijino sida dhowr ilbiriqsi gudahood ay khubarada Movistar Prosegur Alarmas ay ula xiriiraan si ay u hubiyaan heerka adeegsadaha oo ay u farageliyaan haddii loo baahdo, marka lagu daro:
Ka hel ogeysiisyada abka Durcal ee ku saabsan nooc kasta oo dayrta
Falanqee calaamadaha muhiimka ah ee isticmaalaha gaadhka
Cabir tillaabooyinka oo koontarool waddooyinka uu sameeyay GPS-ka
Ogeysiisyada imaatinka iyo bixista meelaha caadiga ah
Goobta degdega ah ee GPS
Madax-bannaanida qiyaastii 15 maalmood
Shaki la'aan waa beddelka si ay u awoodaan in ay helaan xasilloonida maskaxda, kharashka, dabcan, laakiin waxay si sax ah u siinaysaa waxa ay ballanqaadayso marka la eego waxqabadka iyo kartida, iyada oo aan wax iska yeelyeel ah oo ka baxsan waxa lagu bixiyay buug-yaraha. Waxaad si toos ah uga iibsan kartaa shabakadeeda ama adoo wacaya 900 900 916 oo qandaraas qorshaha ku qancisa ugu badan, waxaad ku heli doontaa 48 saacadood gudahood markaad qandaraas ku qaadato.
Ma jiro habayn
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Durcal, goob goobiye leh GPS oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn